Antenimiera roa tonta : mifidy ny lehibeny ny samy mpanohitra na ny fivoriambe | NewsMada
Antenimiera roa tonta : mifidy ny lehibeny ny samy mpanohitra na ny fivoriambe
“Voalazan’ny And. 14 ao amin’ny lalàmpanorenana fa fidin’ny mpanohitra rehetra izay ho lehibeny, ary tsy maintsy ao amin’ny Antenimiera mpanao lalàna fa tsy avy any ivelany”, hoy ny filohan’ny Antenimierandoholona sady mpahay lalàna rahateo, Rakotomanana Honoré, teny Anosy, omaly, momba ny toeran’ny lehiben’ny mpanohitra eny anivon’ny Antenimiera roa tonta.
Raha tsy mifanaraka ny samy mpanohitra amin’ny fanendrena izay ho lehibeny, fidin’ny fivoriambe izany. Raha olona telo na roa, ohatra, no mirotsaka amin’izany, depiote na loholona: lasa lehiben’ny mpanohitra izay mahazo vato be indrindra. Filoha lefitry ny Antenimierandoholona avy hatrany, ohatra, izy, ary tsy maintsy mitarika vaomiera iray.
Ara-demokratika ny fanoherana
Ara-demokratika ny fanoherana, araka ny voalazan’ny lalàmpanorenana. Efa filohan’ny Antenimierandoholona teo aloha ny filoha Rakotomanana Honoré, mey 2001. Nisy ny mpanohitra tamin’izany, nefa tsy nanakana ny asa izany. Tsy mba nisy tabataba tao amin’ny Antenimierandoholona tamin’izany, na nisy fanoherana aza.
Tsy fanoherana bontolo no atao fa enti-manatsara zavatra, ary tsikera enti-manatsara fa tsy tsikera befahatany. “Kendrena ny hahasoa ny tanindrazantsika, ny hahasoa ny Malagasy 22 tapitrisa. Raisina hatrany raha misy fanoherana amin’ny hevitra tsara”, hoy izy.